कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तार हुँदै
सुर्खेत । कोहलपुर–सुर्खेत विद्युत् प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार हुने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १३२ केभीको लाइन विस्तार गर्न आवश्यक प्रक्रिया शुरू गरिएको बताएको छ । कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना प्रमुख रवि चौधरीले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्र...
दैलेख । पदम खेला, लोहरे खोला, अपर लोहरे खोला र द्वारीखोला जलविद्युत् आयोजनाका कारण कर्णाली प्रदेशकै नमूना ‘हाइड्रो हब’ गाउँपालिका बनेको छ नौमुले । तर आयोजनाहरूले आईईको प्रतिवेदन अनुसार काम नगर्दा यहाँका अधिकांश बस्ती उच्च जोखिम छन् । जलविद्युत्् आयोजना निर्माणको क्रममा ध्यान नदिइँदा बस्त...
मदिरा सेवन गर्नेलाई १० हजार जरीवाना
जाजरकोट । मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएर जिल्लाको नलगाड नगरपालिकाले मदिरा नियन्त्रण शुरू गरेको छ । नगरपालिकाभित्रका सबै वडामा अवैध रूपमा मदिरा सेवन गर्ने तथा विक्री गर्नेलाई रू. १० हजार जरीवाना गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । एकै व्यक्तिले पटक–पटक मदिरा सेवन तथा विक...
तरकारी खेतीमा डढुवा रोगको प्रकोप
दैलेख । दैलेखका ग्रामीण भेगमा लगाइएको तरकारी खेतीमा डढुवा रोगको प्रकोप बढेको छ । भदौ पहिलो सातादेखि नै रोगको प्रकोप बढेको र हाल गोलभेडा लगायत तरकारी खेती भएका अधिकांश पोलिहाउस (प्लास्टिकको टनेल) मा फैलिएको कृषि ज्ञान केन्द्र दैलेखले जानकारी दिएको छ । पश्चिम दैलेखको चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाक...
कृषि उपज संकलन केन्द्र प्रयोगविहीन
सल्यान । सल्यानका विभिन्न स्थानमा निर्माण गरिएका कृषि उपज संकलन केन्द्र प्रयोगविहीन बन्दै गएका छन् । किसानहरूले बारीबाटै सीधै व्यापारीलाई तरकारी विक्री गर्न थालेपछि निर्माण गरिएका भौतिक संरचना अलपत्र पर्न थालेको बन्गाड कुपिन्डे नगरपालिकाका कृषक तुंगबहादुर बुढाले बताए । ग्रामीण कृषि सडक निर्माण भएपछि...
सुर्खेत (अस) । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले दशैं, तिहार र छठ पर्वको अवसरमा ग्राहकलाई विशेष छूट दिन उद्योगी तथा व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत निजी क्षेत्रका तर्फबाट चाडपर्व लक्षित गरेर वस्तुको विक्रीमा छूट दिन मंगलवार बसेको संघको बैठकले आग्रह गरेको हो । चाडपर्वमा...
पर्वत (अस) । पर्वतमा गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३४६ ओटा घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पर्वतका अनुसार कृषि तथा वनतर्फ सबैभन्दा बढी २०६ ओटा उद्योग दर्ता भएका छ्न । सेवामूलक ५९, पर्यटन ५२ र उत्पादनमूलक २९ ओटा उद्योग दर्ता भएका छन् । कार्यालय प्रमुख उद्य...
शनिवारदेखि अवरुद्ध कर्णाली राजमार्ग सञ्चालनमा
भदौ २३, जुम्ला । तिलागुफा नगरपालिकाका–७ टाकुल्ला कालीकोटस्थित अवरुद्ध कर्णाली राजमार्ग सञ्चालन भएको छ । शुक्रवार राति आएको बाढीले शनिवारदेखि कालीकोट खण्डको उक्त राजमार्ग अवरुद्ध भएको थियो । आइतवार सडक डिभिजन कार्यालय जुम्ला र कालीकोटबाट आएको जेसिबीले दिनभरि बाटो निर्माण गरेपछि बेलुका ६ बजे सडक...
सल्यान । सल्यानको बागचौर नगरपालिका–११ र १२ मा पर्ने बाफुखोलाबाट यस सिजनमा रू. १५ करोडको आलु निर्यात भएको कृषि ज्ञान केन्द्र सम्पर्क कार्यालय सल्यानले बताएको छ । बाफुखोलाका स्थानीयले करीब दुई हजार रोपनीमा आलु खेती गर्दै आएका छन् । आलुको पकेट क्षेत्रको रूपमा चिनिएको बाफुखोलाका किसान यसबाट मनग्य...
कार्यालय खारेजीपछि भवन प्रयोगविहीन
दैलेख (अस) । संघीय व्यवस्थापछि दैलेखमा खारेज भएका सरकारी कार्यालयका भवनहरू अहिले प्रयोगविहीन बनेका छन् । खारेज हुने निश्चित भए पनि धमाधम टेन्डर हालेर बनाइएका करोडौं लागतका भवन उपयोग हुन नसकेको हो । डेढ वर्षअघि मात्रै रू. १ करोड ९४ लाख लगानीमा निर्माण गरिएको जिल्लास्थित पशु सेवाको कार्यालय अहिले ख...